Iindaba-Abathengi bamazwe angaphandle bandwendwela umzi-mveliso
NgoSeptemba 18, 2019, abathengi baseTurkey batyelela.
Umthengi ovela eTurkey weza kutyelela i-factory yethu.Abathengi batyelele iworkshop yethu, baqonde inkqubo yokuvelisa, baqonde amandla enkampani yethu kunye nomthamo wemveliso yenkampani yethu.Sixelele umthengi malunga nenkampani, inani labantu, oomatshini, ubuninzi. yokuthunyelwa, kunye nokunye.Umthengi wafunda malunga nomthamo wokuvelisa kunye namandla enkampani yethu, wavavanya umgangatho weemveliso, wanelisekile kakhulu ngeemveliso zethu, kwaye waseka ubudlelwane bexesha elide lomthengi kunye nenkampani yethu.
NgoJanuwari 16, 2020, abathengi baseAfrika bandwendwela.
Umthengi wayala kwimarike yaseIndiya ngaphambili, kodwa emva kokuthelekisa ixabiso, imarike yasekhaya ikhuphisana ngakumbi.I-Shandong isiseko sokuvelisa intambo yentambo, abathengi bafumana i-factory yethu ngokuthelekisa kwi-Intanethi.
Umthengi undwendwele iworkshop, kwaye samnika ingcaciso ecacileyo yenkqubo yemveliso kwaye sabonisa umgangatho wentambo.Umthengi waneliseke kakhulu ngumgangatho, kwaye wanelisekile ngamandla enkampani xa ebona i-workshop enkulu yemveliso yenkampani yethu.Umthengi ke wasebenza nathi kwaye uye wafaka ii-odolo zeekhonteyina ezine ngenyanga kumzi-mveliso wethu. ukuthi ga.